Shabelle Media Network – Barlamanka oo isku raacay lacagihii laga qaadi lahaa Musharixiinta dalka
Barlamanka oo isku raacay lacagihii laga qaadi lahaa Musharixiinta dalka
Xildhibaanada barlamanka Somaliya
Muqdisho: (Sh. M. Network) Xildhibaanada barlamanka Soomaaliya oo maanta kullan ku yeeshay Xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay warbixin ka dhageysteen Guddiga Doorashada Madaxtinimo ee dalka Soomaaliya oo soo bandhigay qaabka ay howsha u wadaan.
Xildhibnaada ayaa guda galay qodobka tilmaamayay in Musharax waliba laga doonayo in uu la yimaado illaa 20-Xildhibaan, waxaana kullankii maanta shir guddoominayay guddoomiyaha barlamanka cusub ee Soomaaliya Prof. Max’ed Sheekh Cismaan Jawaari oo ay garbahiisa fadhiyeen labadii ku xiggeenno.
Mudayaasha ayaa isku raacay in musharax ay u codeyn karaan illaa 3-jeer, hase ahaatee mar afarad aan laga aqbali doonin, waxaana barlamanka ay isku raaceen in Musharax waliba laga qaado 10-kun oo dollar-ka Maraykanka ah.
Guddoomiyaha barlamanka ayaa soo bandhigay Xildhibaanada ka maqan barlamanka oo uu sheegay inay muhiim yihiin, isagoo sheegay in is qab qabsi uu ka dhex taagan yahay, hase ahaatee lagama maarmaan ay tahay in la xalliyo.
Jawaari waxa uu sheegay in shanta Beelood oo uu ka kooban yahay barlamanka Soomaaliya laga soo xulo shan Xildhibaan oo Miisaan leh si ay usoo afjaraan khilaafaadkaasi, taasi oo ay si wayn usoo dhaweeyeen Xildhibaanadii maanta kullankaasi isug yimid.
Shanta Xildhibaan ee loo xulay inay dhameeyaan qilaafka ka dhex jira barlamanka ayaa waxa ay kala yihinin.
Xildhibaan Bashiir Caddow Calasow
Xildhibaan Nuur Faarax Jaamac
Xildhibaan Maxamed Warsame Maxamed (Feysal)
Xildhibaan Maxamed Xasan Aadan
Xildhibaan Xuseen Cusmaan Xuseen
Inkastoo guddi loo xil saaray Xubnaha uu khilaafaadka ka dhex taagan yahay ee barlamanka ka tirsan inay kala saaraan Xildhibaanada isku haysta xilalka ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa xilli Xubnahaani horey isugu khilaafeen Maxkamadda sare ee dalka iyo Guddiga farsamada ee soo xulidda barlamanka Soomaaliya.
Daawo Sawirrada Related »